England oo u soo gudbay Wareega 8-da +SAWIRRO+VIDEO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
England oo u soo gudbay Wareega 8-da +SAWIRRO+VIDEO
Xulka qaranka England ayaa u soo baxay siddeed dhamaadka koobka aduunka kadib markii ay kulan laysla daalay rekoodhayaal 4-3 ah ku garaaceen Colombia. Enlgand ayaa waqtigii rasmiga ahaa ee ciyaarta ilbidhiqso u jirtay guusha ay rafaadka markii danbe ku heshay iyada oo Yerry Mina uu waqtigii dheeriga ahaa ee 90 ka daqiiqo dheeraa uu goolka barbaraha ciyaarta ugu soo celiyay.
Laakiin England ayaa ugu danbayn rekoodhayaal 4-3 ah ku khaarajisay Colombia oo si xoogan ugu dagaalantay in ay u soo baxdo siddeed dhamaadka koobka aduunka laakiin England ayaa hadda siddeed dhamadka balan kaga samaysatay Sweden.
Kaydka: Marcus Rashford, Eric Dier, Gary Cahill, Phil Jones, Jamie Vardy, Nick Pope, Danny Welbeck, Trent Alexander-Arnold, Danny Rose, Ruben Loftus-Cheek, Jack Butland.
Xulalka England iyo Colombia ayaa ciyaarayay kulankii ugu danbeeyay ee wareega 16ka xul ee koobka aduunka waxayna doonayeen in ay noqdaan xulka siddeed dhamaadka kula ciyaaraya Sweden oo sii sugaysay laakiin qaybtii hore ee kulankan oo ahayd mid aad u adkayd ayuu xulka England ahaa kan fursadaha fiican helay balse aan abuurin fursadihii laga filayay.
Colombia ayaa qaybtii hore muujisay difaacasho fiican iyo waliba kubbad rogaal celis deg deg badan balse Three Lions oo si xoogan kulankan ugu soo diyaar garoobay ayaa abuuray fursado fiican oo ay xataa goolal ku heli kareen.
Harry Kane, Raheem Sterling iyo Trippier ayaa ahaa xidigaha halista ugu badan ku abuurayay goolka Colombia balse qaybtii hore ee ciyaarta ayaan noqon mid wax goolal ah layska dhaliyay iyada oo England iyo Colombia uu midba hal bartilmaameed oo kaliya goolka ku beegsaday.
Laakiin dhacdada ugu wayn ee qaybtii hore sida wayn looga hadlayay ayaa ahayd daqiiqadii 41 aad markii uu xidiga ree Colombia ee Wilmar Barrios uu madaxa ku herdiyay Jorden Henderson kaas oo isna si wayn uga falceliyay isla markaana dhulka isku tuuray wuxuuna garsooruhu Wilmar Barrios siiyay kaadhka digniinta ah oo kalliya.
Ciyaartoyda England ayaa si wayn ugu dooday in garsooruhu uu dib u soo eego dhacdadan oo uu ku laabto muuqaal caawiyaha garsooraha laakiin Wilmar Barrios ayaa ka badbaaday in kaadhka cas oo toos ah la siiyo wuxuuna sii watay ciyaarta inkasta oo uu nasiib wayn ku lahaa in aan casaan loo taagin.
Iyada oo hore xulka qaranka England ay uga cowdeen in VAR ayna cadaalad ka helin kulaamdii la soo ciyaaray isla markanaa rekoodhayaal ay heli karayeen uu ka beeniyay ayay markale saxaafada iyo jaamahiirta England si wayn uga cadhoodeen in Wilmar Barrios uu ciyaarta baaqi ku si ahaaday.
Si kastaba ha ahaatee, qaybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay barbaro gool la’aan ah iyada oo England awood ahaan saraysay balse aan waxba uga faa’iidaysan halka Colombia ay shaqo wayn ka qabtay difaac ahaan.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta ayuu xulka qaranka England sii laba jibaaray dadaalkii uu ku raadinayay goolka furitaanka waxayna culays saareen difaaca xulka Colombia oo qaybtii hore aamusiiyay weerarka Three Lions.
DAQIIQADII 54 aad REKOODHE!! Xulka qaranka England ayaa lagu abaal mariyay rekoodhe kadib markii uu Carlos Sanchez dhulka dhigay Harry Kane oo xerada ganaaxa Colombia ku jiray wuxuuna garsooruhu tilmaamay in ay rekoodhe tahay.
DAQIIQADII 57 aad isjiid jiid iyo muran kadib Harry Kane ayaa kubbada hor dhigtay goolka Colombia wuxuuna wajahay goolhayaha ay London ku xifiltamaan ee David Ospina laakiin Kane ayaa si degan kubbada ugu beegay badhtanka goolka halka Ospina uu dhinaca midig isku tuuray taas oo keentay in Kane uu goolkan dhaliyo wuxuuna ciyaarta ka dhigay 1-0 ay Three Lions ugu danbayn hogaanka ciyaarta ku qabteen.
Harry Kane ayaa goolkan taariikh ku dhigay isaga oo noqday xidigii ugu horeeyay ee England ah kaas oo England lix kulan oo xidhiidh ah goolal u soo dhaliyay tan iyo sanadkii 1939 kii oo uu rekoodhkaas dhigay Tommy Lawton.
Markale Harry Kane ayaa noqday xidigii labaad ee England lix gool oo koobka aduunka ah u soo dhaliyay waxaana sidoo kale rekoodhkan sanadkii 1966 kii gaadhay Gary Lineker oo si wayn ugu sacab tumayay xulkiisa England intii ciyaartani socotay isla markaana fariimo badan ku soo qorayay Twtterka.
DAQIIQADII 63 AAD Dele Alli ayaa ugu dhawaaday in uu sii niyadjabiyo xulka Colombia oo u muuqday in xaalad xun uu ku abuuray goolka England la timid wuxuuna Alli helay fursad cajiib ah laakiin waxa uu awoodi waayay in uu dhaliyo goolka labaad ee cadaadiska ka yarayn lahaa.
Dhamaadkii ciyaarta Colombia ayaa wax walba u samaysay sidii ay goolka barbaraha u keensan lahayd ugu danbayn cadaadis ku abuureen England laakiin Three Lions ayaa ogaa in xaalad adag ay gali karaan haddii dhamadkii ciyaarta ay goolka barbaraha la yimaadaan Colombia wayna markooda bilaabeen in ay natiijada difaacdaan.
DAQIIQADII 90+3 aad Alla Maxay waali Ahayd!! Geesiga Colombia ee koobka aduunka Yerry Mina ayaa ilbidhiqsiyadii ugu danbeeyay ciyaarta guuldaro ka badbaadiyay xulkiisa isaga oo waliba si layaableh England uga horjoogsaday guusha ay ilbidhiqsiyada u jireen kadib markii uu Mina caawin ka helay Juan Cuadrado.
Yerry Mina oo hore Colombia halkan u soo gaadhsiiyay isla markaana ahaa xidigii Senegal guuldarada baday ayaa waqti la filayay in xulkiisa Colombia uu koobka aduunka ka hadhay waxa uu indhaha ku xaday goolka barbaraha kaas oo ahaa goolkiisii saddexaad ee koobka aduunka.
Waqtigii rasmiga ahaa ee ciyaarta ayaa ku dhamaaday barbaro 1-1 ah taas oo qasab ka dhigtay in 30 daqiiqo oo dheeri ah ciyaarta lagu daro.
WAQTIGA DHEERIGA AH EE COLOMBIA & ENGLAND.
Tababaraha xulka qaranka England ee Garth Southgate oo badaladii ugu danbeeyay ee xulkiisa u sameeyay in uu ciyaarta waqtigeedu dhamaadka ahaa uu ku rido ayaa markan la kulmay xaalad cusub isaga oo daqiiqadii 88 aad Jamie Vardy ku badalay Raheem Sterling.
DAQIIQADII 102 AAD Southgate ayaa ciyaarta ka saaray Ashley Young wuxuuna kaydka uga yeedhay Danny Rose waxayna labada xul raadinayeen qaabkii ay ku heli lahaayeen goolka guusha si ayna rekoodhayaal ugu gudbin ciyaartu.
Waqtigii yaraa ee nasashada 15ka daqiiqo ee hore ee waqtiga dheeriga ahaa ayaa markale lagu kala baxay barbaro 1-1 ah taas oo la micno ahayd in 15 daqiiqo oo kaliya ay haysteen Colombia iyo England si ay goolka guusha u keensadaan hor inta aan rekoodhayaal laysla tagin.
DAQIIQADII 113 AAD Southgate ayaa isticmaalay badalka afraad ee sharciga cusub ee koobka aduunku u ogol yahay wuxuuna ciyaarta soo galiyay Marcus Rashford si uu ugu xoojiyo Harry Kane iyo Jamie Vardy oo weerarka ku sii jiray si ay goolka guusha u raadiyaan wuxuuna saaray Kale Walker.
England ayaa markan si xoogan u bilawday in ay goolka guusha raadiyaan si ay uga baxsan karaan rekoodhayaal waxayna heleen fursado fiican iyada oo Eric Dier iyo Kieron Trippier ay darbooyin madax ah ku beegsadeen goolka Colombia.
Ugu danbayn 30 kii daqiiqo ee dheeriga ahaa ayay labada xul ku keensan kari waayeen goolka guusha taas oo keentay in kulankii saddexaad oo wareega 16ka xul ee koobka aduunka ah rekoodhayaal laysla gaadho, wuxuuna tababare kastaaba bilaabay in uu soo qoro liiska shanta ciyaartoy ee rekoodhayaasha u tuurayay.
Colombia ayuu nasiibku siiyay rekoodhihii ugu horeeyay waxaana u tuuray Radamel Falcao kaas oo aan wax qalad ah samayn waxaana rekoodhaha kowaad ee England isku soo taagay Harry Kane wuxuuna isna dhaliyay rekoodhaha kowaad ee Three Lions.
Juan Cuadrado ayaa rekoodhaha labaad ee Colombia gool u badalay halka rekoodhaha labaad ee England tuuray Marcus Rashford kaas oo ka dhigay 2-2. Luis Muriel ayaa Colombia u saddexeeyay laakiin Jordan Henderson ayuu David Ospina ka badbaadiyay rekoodhaha saddexaad ee England.
Laakiin Andrés Uribe ayaa Colombia ka qasaariyay faa’iidada ay heleen kadib markii uu lumiyay fursada rekoodhaha afraad uu ku dhalin lahaa waxaana soo noqotay rajadii England. Laakiin Kieran Trippier ayaa England u saxiixay rekoodhihiisa iyada oo wali barbaro la sii ahaa.
Carlos Arturo Bacca ayaa markiisa lumiyay rekoodhaha Colombia iyada oo Pickford uu xulkiisa Three Lions siiyay fursad dahabi ah, waxaana markan rekoodhaha guusha ee England isku soo taagay Eric Dier kaas oo aan wax qalad ah samayn waxayna ugu danbayn England siddeed dhamaadka ugu soo baxday rekoodhayaal 4-3 ah.